लाईफस्टाइल​ | Digital Dainik
अनौठा ट्रम्पका अचम्म लाग्ने आनीबानी, एकै दिनमा १२ क्यान डाइट कोक !
अनौठा ट्रम्पका अचम्म लाग्ने आनीबानी, एकै दिनमा १२ क्यान डाइट कोक ! काठमाडौं, फागुन ७ः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सर्वाधिक विवाद र चर्चामा छाउँछन् । आफूलाई मन नपर्ने व्यक्तिविरुद्ध प्रस्तुत हुने उनको आक्रामक शैली नै चर्चामा आउने मुख्य कारण हो । सामाजिक सञ्जालबाट उनी विवादास्पद अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिरहन्छन् । ७१ वर्षका ट्रम्पका केही आनीबानी अचम्म लाग्ने खालका छन् । रिमोट छुन अरूलाई मनाही ह्वाइट हाउसमा ६० इन्च स्क्रिन भएका टेलिभिजन सेट राखिएका छन् । ट्रम्पले टेलिभिजनमा विभिन्न कार्यक्रम तथा समाचार नियालिरहेका हुन्छन् । न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार टेलिभिजनको रिमोट अरूले छोएको ट्रम्पलाई मन पर्दैन । उनको अपेक्षा …
जान्नुहोस्,भ्यालेन्टाइन डे मा कुन राशिलाई कस्तो गिफ्ट दिने ?
जान्नुहोस्,भ्यालेन्टाइन डे मा कुन राशिलाई कस्तो गिफ्ट दिने ? काठमाडौं, फागुन २ः ऋतुराज वसन्तको आगमनसँगै वातावरणमा वसन्त बहारको प्रदुर्भावले प्रत्येक व्यक्तिको मन झङ्कृत भइरहेको छ, त्यसैले पनि होला वसन्त ऋतु र प्रेम दिवसको अनोन्याश्रित सम्बन्ध भएको । फक्रँदै गरेको प्रकृतिको यो मोहकपनले प्रत्येक व्यक्तिमा प्रेमिल भावनालाई अंकुरण गरेको छ । यो प्रेमको भावना वा प्रेम सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउन वा सुनमा सुगन्ध थप्न आउनुहोस् पौराणिक शास्त्रको माध्यमबाट आफ्नो प्रेमी–प्रेमिकाको स्वभाव बुझौँ । उपहार दिँदा राशिअनुसारको रङ छनोट गरौँ, जसले तपाईंंको प्रेम दिवस अझै रंगिन बनोस् । मेषः मेष राशि भएका व्यक्तिहरू प्रेमका लागि …
दिनको एक खिल्ली चुरोट पनि घातक एजेन्सी, माघ १२ः दिनको एक खिल्ली चुरोट पनि मानव स्वास्थ्यका लागि घातक रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । ब्रिटेनका वैज्ञानिकहरूले भनेका छन्, चुरोटको मात्रा घटाएर धुमपानका कारण स्वास्थ्यमा पर्ने हानि कम गर्न सकिँदैन त्यही भएर पूर्ण रुपमा चुरोट सेवन रोक्न जरूरी छ। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार दिनको २० खिल्ली चुरोट सेवन गर्ने मानिसले एक खिल्ली मात्र चुरोट पिउँदासमेत स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय जोखिम रहने गर्छ। उनीहरूका अनुसार चुरोट सेवन पूर्ण रुपमा नगर्दा पुरूषको हकमा मुटुको रोग वा मस्तिष्कघातको जोखिम आधा हुन्छ भने महिलाको हकमा दुई तिहाइले कम हन्छ। उनीहरू भन्छन् चुरोट …
‘ब्रा’को साइजअनुसार रेस्टुरेन्टमा छुट, ठूला स्तनलाई भारी छुट !
‘ब्रा’को साइजअनुसार रेस्टुरेन्टमा छुट, ठूला स्तनलाई भारी छुट ! बेइजिङ: महिलाको ब्राको आकारअनुसार छुट दिने घोषणा गरेपछि चीनको एउटा रेस्टुरेन्ट विवादमा तानिएको छ । झेङझियाङ प्रान्तको हाङझोउको ट्रेन्डि स्रिम्प रेस्टुरेन्टले छुट दिने घोषणा सहितको विज्ञापन सार्वजनिक गरेपछि विवादमा तानिएको हो । ब्रा र पेन्टीमा सजिएर लामबद्ध उभिएका महिलाको कार्टुनसहितको विज्ञापन कम्पनीले सार्वजनिक गरेको छ । विज्ञापनमा सम्पूर्ण सहरले स्तन खोजिरहेकोु नारा लेखिएको छ । रेस्टुरेन्टले दिने छुट महिलाको कप साइजमा निर्भर हुने र सबैभन्दा ठूलो स्तन हुने युवतीले भारी छुट पाउने विज्ञापनमा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञापनको पोस्टरमा अश्लील विज्ञापन …
ट्रम्पले जर्मनीमा बस्ने होटल नपाएपछि …
ट्रम्पले जर्मनीमा बस्ने होटल नपाएपछि … काठमाडौं, असार २६ः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जर्मनीको ह्यामवर्गमा निकै समस्या झेल्नु परेको छ । ह्यामवर्गमा आयोजित जी २० मा सहभागी हुन जाँदा ट्रम्पले बस्ने होटलसम्म नपाएको समाचारमाध्यमले जनाएका छन् । जर्मनीका स्थानीय समाचार माध्यमका अनुसार ह्यामवर्गको ‘फोर सिजन्स होटल’ ले ट्रम्पलाई कोठा उपलब्ध नगराएपछि उनी लज्जित भएका थिए । शहरकै ठूलामध्येको होटलमा बस्न नपाएपछि ट्रम्प ह्यामवर्गको संसद भवनमा र उनका कर्मचारी अमेरिकी दूतावासमा बसे । उनले जी २० मा सहभागी अन्य नेतासँग भेटघाट गर्नुअघि होटल बुक गराउन ढिला गरेकाले ह्यामवर्गमा ठूलो होटल नपाएको …
समुन्द्री जीवले यसरी तान्यो बालिकालाई समुद्रमा (भिडियो)
समुन्द्री जीवले यसरी तान्यो बालिकालाई समुद्रमा (भिडियो) एजेन्सी : अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाईरल बनेको क्यानडाको एक भिडिया हेरेपछि जो कोहिको पनि आङ नै सिरिङ्ग हुन्छ। यो भिडियोमा एक बालिका समुन्द्रको किनारामा बसकी थिइन् त्यतिबेला एक समुन्द्री जीवले उनलाई मुखले तानेर पानीमा खसालेको छ । वासिङ्टन पोष्टको खबर अनुसार क्यानडाको पश्चिमी तटमा बनेको डकमा मानिसहरु समुन्द्री जीवलाई खानेकुरा दिएर उनीहरुको व्यवहार देखेर दङ्ग परिरहेका थिए । त्यहाँ रहेका समुन्द्री जीव पनि मानिसहरुले दिएको खाना खान पाएर रमाइरहेका थिए । त्यसै क्रममा एक बालिका किनारामा बसेकी थिइन्, त्यतिबेलै उक्त समुन्द्री जीव पानीबाट उफ्रेर बालिकालाई आफ्नो …
धेरै सुन्दर हुनुपनि अभिशाप ! सरकारले लगायो चलचित्र खेल्न प्रतिवन्ध (तस्बिरसहित)
धेरै सुन्दर हुनुपनि अभिशाप ! सरकारले लगायो चलचित्र खेल्न प्रतिवन्ध (तस्बिरसहित) एजेन्सी : सुन्दर युवती सबैको आकर्षणमा पर्ने सामान्य बिषय हो । युवतीको सुन्दरताकै कारण कतिपय युवाहरु पागल बन्छन् । त्यसैपनि युवतीहरु सुन्दर बन्न चाहन्छिन् । तर सुन्दरता सँधै अरुलाई आकर्षण गर्नको लागि मात्र हो भन्ने धारणा पनि गलत हुँदो रहेछ । सुन्दर भएकै कारण एक अभिनेत्रीले भने आफुले जानेको पेशाबाटै हात धुनुपरेको छ । सुन्दर भएकै कारण सरकारले नै चलचित्र अभिनयमा रोक लगाई दिएपछि मर्नु न बाँच्नु भएको छ । कम्बोडियाकी २५ वर्षिया सुन्दरी अभिनेत्री डेनी नन् यस्तो पीडामा परेकी हुन् । उनी त्यहाँको सरकारको नजरमा यति सुन्दर र सेक्सी बनिन् की एक वर्षको लागि चलचित्रमा …
स्वस्थ रहनु छ भने कहिल्यै खान नछुटाउनुहोस् यी खानेकुराहरु ! काठमाडौं : अत्याधुनिक जीवनशैलीको सबैभन्दा ठूलो असर मानिसको स्वास्थ्यमा पर्ने गरेको छ । लामो समयसम्म कार्यालयमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता, तनाव र घरपरिबारको जिम्मेवारीलगायतका कारण हामी चाहेर पनि स्वस्थ बन्न सकेका हुँदैंनौं । कामको व्यस्तताले कतिपयले सुत्न समेत नपाएको गुनासो गर्ने गर्छन् । फुर्सद नपाएर आरामको लागि साप्ताहिक बिदा कहिले आउला भनेर औंला भाँच्ने जमात पनि उल्लेखनीय छ । व्यस्तताका कारण धेरैले स्वास्थमा ठूलो मुल्य चुकाएका छन् । खानपिन र आहारमा राम्रो बिचार पुर्याएमा मानिस पूर्ण रुपमा स्वस्थ बन्न सक्ने विज्ञहरु बताउछन् । नियमित रुपमा यी खानेकुरा …
धेरै सेल्फी खिच्ने बानी छ ? होसियार यस्तो रोग लाग्ला ! एजेन्सी, चैत्र २८ः समयको परिवर्तन र प्रविधिको युगसँगै अत्यधिक मेसेज टाइप गर्दा वा मोवाइल चलाउँदा औला खेलाउँदा र नसामा समस्या बढेको गुनासो बढिरहेकै बेला सेल्फी कूलतले धेरै किशोर किशोरी पीडित छन् । सेल्फी कूलतलाई मेडिकल भाषामा ‘सेल्फी इल्बो’ भनिन थालिएको छ । सेल्फी इल्बो अहिलेको जल्दोबल्दो चिकित्सकीय समस्या बन्न थालेको छ । धेरै सेल्फी खिच्ने क्रममा मानिसमा सेल्फी इल्बोको खतरा बढेको विज्ञ बताउँछन् । सेल्फी इल्बोले कुहिनोमा अत्यधिक पीडा भएको गुनासो गर्दै चिकित्सकहाँ उपचार गर्न आउनेमा १० वर्षका बालकदेखि ५० वर्षका वयस्क रहेका छन् । अमेरिकास्थित विशेष …
पत्यानुहुन्छ ? १ रुपैयाँमै पाइन्छ स्मार्टफोन
पत्यानुहुन्छ ? १ रुपैयाँमै पाइन्छ स्मार्टफोन काठमाडौं, चैत्र २३ः चिनीयाँ स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी सियाओमीले केवल एक रुपैयाँमा स्मार्टफोन बिक्री गर्ने भएको छ । सियाओमीले बुधबार ६ अप्रिलमा फ्यान फेस्टिभल आयोजना गर्दैछ । उक्त मेलामा कम्पनीले १ रुपैयाँ (भारु) मा आफ्नो उत्पादन रेडमी नोट फोर बिक्री गर्ने भएको हो । यही एक रुपैयाँमै रेडमी नोट फोर को २ जीबी र्याम तथा ३२ जीबीका भेरियन्टको खरिद गर्न सकिन्छ । यसका साथै अन्य उत्पादन पनि सुलभ मूल्यमा पाइने कम्पनीले आफ्नो वेबसाइटमार्फत जानकारी गराएको आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ …